Duqeyn xubno katirsan Daacish lagu dilay oo Mareykanka ka fuliyay Puntland | Keydmedia
Duqeyn xubno katirsan Daacish lagu dilay oo Mareykanka ka fuliyay Puntland
Militeriga Mareykanka ee Africa, ayaa soo saarey qoraal uu ku xaqiijiyanayo duqeynta, oo lala eegtay saldhig Daacish ay ku leedahay dhulka buuralayda ah ee gobolka Bari.
MUQDISHO, Soomaaliya - Diyaarad Drone ah oo Ciidamada Mareykanka leeyihiin ayaa duqeyn cirka ah ka fuliyay buuralayda gobolka Bari, halkaasi oo lagu beegsaday Xubno katirsan Kooxda Daacish Maalintii shalay, July 21.
Weerarka ayaa ka dhacay degaanka Timirshe, oo 140-KM Koonfur Bari uga beegan magaaladda Boosaaso, waxaana lagu dilay 7 dagaalyahan oo Kooxda Daacish kamida ahaa, kuwaasoo sida AFRICOM sheegtay weerar ku qaadey Ciidamada Puntland.
War-Saxaafadeedka AFRICOM waxaa lagu xusay inaysan jirin wax khasaaro ah, oo shacabka kasoo gaarey howlgalka, iyadoo dhinaca kale aysan war kasoo saarey duqeynta Saraakiisha Maamulka Puntland, oo loo maleynayo inaysan ka warheynin waxa ka dhacay degaanadooda.
Sanadkii tagey, Mareykanka ayaa hogaamiye sare oo Daacish katirsanaa ku dilay duqeyn noocan ah oo isla gobolka ay ka fuliyeen.
Waxaa jira eedeymo hay'adaha xuquuqda aadanaha u jeedinayaan Mareykanka oo ku aadan inay howlgalkooda Soomaaliya ku dileen dad badan oo shacab ah, taasoo ka dhigaysa inay dembiyo dagaal ka geysanayaan dalka.
0 Comments Topics: africom al shabaab mareykanka puntand
Warar 9 September 2020 18:54
Nin jeclaysiga iyo musuq-maasuqa Soomaaliya
Warar 8 September 2020 20:07